किन बोलायो संसद : एमसीसीदेखि जबरालाई महाअभियोगसम्मको चर्चा ! – SaipalNews.com
काठमाडौं १७ मंसिर । सरकारले संघीय संसदको नवौं अधिवेशन अन्त्य गरेको ४५ दिनपछि दशौं अधिवेशनको बैठक बोलाएपछि विभिन्न राजनीतिक दलले आशंकाको नजरले हेरेका छन् । खासगरी सरकारले एमसीसी परियोजनालाई संसदमा प्रवेश गराउन खोजेको एमाले र माओवादी केन्द्रले आशंका गरेका छन् । यसका साथै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने चर्चा पनि चलेको छ ।
मंसिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यही मंसिर २८ गते दिउँसो २ बजेका लागि संघीय संसदका दुबै सदनको बैठक डाकेकी छिन् ।
अघिल्ला वर्षहरुमा पुसको दोस्रो सातातिर मात्रै संसदको हिउँदे बैठक बोलाउने चलन थियो । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको अन्तिम मिति मंसिर २७ गते रहेको र त्यसको भोलिपल्टै संसद बैठक बोलाउनु अर्थपूर्ण रहेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले पनि सरकारले छिट्टै संसद बैठक बोलाउनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरेको छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले गत मंसिर १ गते नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच एमसीसी पास गर्ने छलफल भएको र १४ डिसेम्बर अर्थात मंसिर २८ गते अमेरिकामा एमसीसीबारे छलफल हुने कार्यक्रम रहेकाले सोही दिन पारेर संसद बैठक बोलाइएको हो कि भन्ने आशंका देखिएको बताए ।
यसबारे सत्ता सञ्चालक गठबन्धन दलबीच कुनै छलफल नभएको गुरुङले बताए । उनले भने, ‘सरकार सञ्चालनको विधिअनुसार सबैभन्दा पहिला यसबारे सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा छलफल हुनुपर्छ । सरकार एक्लैले गर्न पाउने विषय त हैन । अहिलेसम्म सयबारे छलफलका लागि ५ दलको बैठक राखिएको छैन ।
यसबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नै भएको छैन् । पाँच दलको बैठक बस्ने बेला एजेण्डाको रुपमा आयो भने त्यही बेलामा छलफल हुने भयो । अहिलेसम्म एजेण्डाको बारेमा प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभएको छैन ।’
गुरुङले एमसीसीको विषय संसदमा लैजाने हो भने सत्ता गठबन्धनमा छलफल मात्रै नभई यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति नै जुटाउनुपर्ने बताए । एमसीसीमा भएका सेवा सर्तका विषयमा त्यसलाई परिमार्जित गर्ने वा के गर्ने भन्नेबारेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकमत हुनुपर्नेमा माओवादीको धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।
माओवादी नेता गुरुङले भने, ‘संसदमा एमसीसी पास गर्न ल्याइयो भने माओवादीको भूमिका प्रष्ट छ यसबारे भनिरहनुपर्दैैन । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय रुपमा छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा नपुगी एमसीसी अगाडि बढ्दैन भन्ने नै देखिन्छ ।’
के गर्ला एमाले ? ओली भन्छन्ः संसद अवरोध कायम रहन्छ
सरकारले संसदमा एमसीसीको एजेण्डा सहज प्रवेश गराउन सम्भव भने छैन । नवौं अधिवेशनका सम्पूर्ण बैठकमा अवरोध गरेको एमालेले दशौं अधिवेशनमा पनि अवरोध गर्ने निश्चितजस्तै छ । एमाले दशौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि पार्टी कार्यालयमा पदबहाली गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ सांसद प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आउने अवस्थासम्म एमालेले संसद अवरोध गर्न नछोड्ने बताएका छन् ।
एमसीसी परियोजना प्रस्ताव छलफलका लागि संसदमा आयो भने एमालेले संसद खुला गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा एमालेले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । यदि एमालेले पहिलेजस्तै संसद अवरुद्ध गरिरहने हो भने पनि एमसीसी प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने मात्र नभई संसदका कुनै पनि एजेण्डा अगाडि बढ्न जटिल अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसका लागि एमालेसँग सहमति जुटाउन सरकारले कुनै प्रयास थालेको छैन ।
जे गर्छु अहिले गर्छु,३ वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुँदैन् म : केपी ओली